TAARIIKHDA KARISTOFAR KOLOMBO - iftineducation.com
TAARIIKHDA KARISTOFAR KOLOMBO
aadan21 / December 12, 2011
K. Kolombo wuxuu ku dhashay magaalada Jenova ( Itaaliya ), sanadka markuu ahaa 1451. Meeshaas ayuu ku koray oo wax ku bartay. Dabadeed baxri buu noqday. Wuxuu cilmiga badda iyo barigaba ku dadaalo, markii danbe ayey la noqotay haddii uu ka dhoofo badda Atlantik inuu tegi karo dalka Hindiya, isaga oon meelna ku leexan. Sidaas daraadeed dawladiisii ayuu weydiistay iney ku kaalmeyso tijaabadaas.
Laakiin, nasiib darro, dawladdi way ka diiddey. Dabadeed wuxuu aaday wadanka isbaanya oo ay daris ahaayeen, wuxuuna boqorka dalkaas u sheegay, hindisadiisii. Boqorkii wuu ka yeelay arrintiisii, wuxuuna siiyay 3 doonyood, baxrina wuu ugu dhigay dad maxaabiis ahaa oo denbiyo calculus galay.
Boqorkii Isbaanya, wuxuu ka ballan qaaday dadki haddii ay Hindiya tagaan oo ay ka soo noqdaan in danbiyadii uu ka cafin doono.
Sidaas ayay ku dhoofeen Kristoofar Kolombo iyo baxaartiisii. Dhib badan ka dib, ayay tageen 12 Oktoobar 1492 jasiiradda Guanahaani ( Ameerika ), isaguse uu ku magacaabay San Salvador.
Kritoofar Kolombo markaas isaga waxay la ahayd, inuu gaaray Hindiya ( Aasiya ).
Isla safarkaas wuxuu tegey Hayti iyo jasiiradda Kuba.
K. Kolombo iyo raggii la jirey, gadaal bay u soo noqdeen oo waxay yimaadeen dalkii Isbaanya, iyaga oo sida alaab badan oo wax walba leh.
Boqorkii Isbaanishka aad buu ugu farxay kolombo, maxaabiistiina denbigii waa laga wada cafiyey.
Dabadeed K. Kolombo dhawr jeer, ayuu ku noqday Ameerika oo dalal badan oo ku yaalla waxaa ka mid ah Jamayka, Kolombiya iyo kuwo kale.
K. Kolombo wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa 1506.
Soomaali Airline Pictures